Solombavambahoaka miisa 21 no mamaritra ny vondrona parlemantera nitsangana teo anivon`ny Antenimieram-pirenena. Nilaza ny filohan`ny GPR, Neypatraiky Rakotomamonjy fa izy ireo dia mivonona hatrany hanohana ny programanasan`ny filoham-pirenena saingy hijoro hanara-maso ihany koa ny asan`ny mpanatanteraka ary hitsangana sy hivelatra bebe kokoa. Nanamafy kosa izy ireo fa « centriste », izany hoe tsy miandany. Amin`ny ankapobeny, ireo solombavanmbahoaka ao anatin`ity vondrona parlemantera GPR ity dia mpanao politika tamin`ny fotoana andron`ny fitondrana Rajaonarimpamianina saingy nirotsaka tamin`ny anarany manokana.
Niisa 10 ireo vondrona parlemantera teo anivon`ny Antenimieram-pirenena nijoro nandritra ny fe-potoam-piasana farany teo dia ny TIM, HVM, Hiaraka Isika, Maitso, Leader Fanilo, VPMMM, MAPAR1, MAPAR2, MAPAR3 ary GPS-ARD